ကြည့်ရတာ ကီး မကိုက်ဖူးဖြစ်နေတယ် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကြည့်ရတာ ကီး မကိုက်ဖူးဖြစ်နေတယ် …
ကြည့်ရတာ ကီး မကိုက်ဖူးဖြစ်နေတယ် …
Posted by fatty on Jan 24, 2012 in Photography, Travel | 33 comments
လေးဖက်ရယ် ဆိုင်းဘုတ်ရှေ့ကို ပြောတာလေ.. အနောက်တွေ ဘေးတွေ ပြောတာမှမဟုတ်တာ ဟီး… ဒီလိုသာဆို အမှိုက်မပုံရ အမှိုက်တွေ မိုးထိရောက်တော့မယ်ပုံစံတွေ၊ ဈေးမရောင်းရေးတာကို သီရိမင်္ဂလာဈေးရှေ့ဆို အဲဆိုင်းဘုတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ဖင်ခုထိုင်ပြီး ရောင်းတဲ့သူတွေလည်း တွေ့လားတွေ့ရဲ့ပါပဲ။ ၀မ်းစာအရေးက ရှိသေးတာကိုး။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့လည်း အဟဲ သိတဲ့အတိုင်းပဲ အကျင့်တွေက တယ်ပြင်ဖို့ ခက်သကိုးရှင့်။
ဒါဟာ တို့ပြေ ဒါတို့မြေ
အဲဒီ “ဈေးမရောင်းရ” ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုဒ်က အဲဒီ ဆိုင်ရဲ့ နာမည် မဟုတ်ဘူးလား အကို??
ဈေးမရောင်းပါ။ မုန့်ရောင်းနေတာပါ။ ( ဈေးဆိုတဲ့အမျိုးရောင်းလို့မှမရတာ။ ဈေးလက်ညှိုးထိုးရောင်းရင် လိမ်လည်မှု့ ၄၂၀ မှု့ကတမှု့၊ ပြည်သူပိုင်ပစ်စည်းအလွဲသုံးစားမှု့ ၆၁ ကတမှု့။ စုစုပေါင်း၂ မှု့။ အောင် မယ်လေး အပြင်တောင်ထွက်ရမှာမဟုတ်) ဒါကြောင့်ဈေးမရောင်းပါ။ မုန့်ရောင်းနေတာပါ။
ဟား ဟား…..မြင်လဲ မြင်တတ်တယ် ကိုဖက်တီးတို့များ…….။
ဆိုင်နာမည် ရုတ်တရက်ဖတ်လိုက်တာ …ကင်း .. ဆိုလားလို့
ကင်း ဆို တော်သေး
သေပြီဆရာ ဖြစ်ပြီ …..
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုဖက်တီးရေ။တော်တော် စည်းကမ်းမဲ့ နေကြတာပါ။
ဈေးမရောင်းရဘူး ဆိုပေမယ့် ဆိုင်မခင်းရလို့ မဟုတ်ဆိုပြီး ထင်တိုင်းကြဲ
ဟွန့် လေးဖက် သူများစီးပွားပျက်အောင်လုပ်နေတာလား ? ဒါလေးထွက်ရဖို့ အရေးတောင် ဟိုအကောင်တွေကို မြိုဖို့ ဆို့ ဖို့ ပေးပြီးမှထွက်လို့ရတာ…။ သိလဲမသိပဲနဲ့ လိုက်ပြောနေတယ်…………..
တစ်ခုခု စဉ်းစားဘို့လိုပြီး ဗျ
အရင်တုန်းက ကပ်ခဲ့တာ ဆိုရင်လဲ အဲဒီဆိုင်းဘုတ်တွေ ညဖက် တိတ်တိတ်လေး
“ ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးလေးဘဲနော် ”
နောက်တစ်ခုက လမ်းဘေးဈေးသည်တွေကို စည်းကမ်းတကျရှိစေဖို့။တစ်နေရာထဲမှာ စုပေါင်းပြီးရောင်းချလို့ရနိုင်မယ့် Food Court တွေကို နယ်မြေအလိုက်ထားပေးစေချင်တယ်…ဒါဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမူကိုလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
ကို zaw min ပြောတာထောက်ခံတယ်။
ကိုဇော်မင်းပြောတာကောင်းပေမဲ့ ညဏ်ကြီးရှင်တွေနေပြည်တော်ကိုလုပ်သလို ဆိုင်တွေ တနေရာထဲစုပြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့ အစားလေး တလုပ်အတွက်သေပြီဆရာဖြစ်နေအုံးမယ်။
ဒီလူ တွေဟာ အရိယာတွေမဟုတ်ကျသေးဘူးဗျ
ဒါကလဲလူ အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး အနည်းအကျဉ်းပါ
အချိန်တန်ငွေပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ လူအချို့သာ ဖြစ်ပါလိမ်မယ်
ရေဒီ ကက်ဆက်ပြင်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ လူ
ပုထုဇဉ်သဘောအရ ကျုပ်တို့လို တခြားလူတွေ မနေနိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့
နေလယ်ဆို ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ဈေးသည်စောင့်
ညဆို ခြင်ကိုက်မရိုက်ရဲအောင် ခြင်ဆေးခွေလေးထွန်း
ဈေးဝယ်သူ လာရင်ပြာပြာသလဲနဲ့ ကိုယ်ပစ္စည်းလေးရောင်းထွက်အောင် ဖိတ်ခေါ် နေရတဲ့ ဈေးရောင်းရတဲ့.. စိတ်ဖိစီးမှုတွေရင်းပြီး
ဒီလိုတွေ တွေ့နေရတာ ၀မ်းရေးအတွက် လုပ်နေကြတာလို့ ထင်တယ်ဗျ
ကိုယ့်လက်ကို ငုံ့ကိုင်ကြည့်ပြီး.. အသားမာနဲ့ တစ်သက်လုံးနေနိုင်မလား အရင်စဉ်းစားသင့်တယ်
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလူတွေဟာ
အရက်သမား ဆိုပြီး မိန်းမနေ့တိုင်းရိုက်နေသူတွေထက်တော့
“ဘီလူးကြီး”ogre ၏ http://myanmargazette.net/95968/uncategorized-other မှ ကော်မန့်ကို အနည်းငယ်ပြောင်းကူးထားပါသည်..။
ဗဟန်း ၃ လမ်း မြေပဒေသာဥယျာဉ် နားက ဆိုင်လေးတွေထင်တယ်..
အထက ၄ စမ်းချောင်းပါ ရှမ်းလမ်း ( ဗဟိုလမ်း ) ပေါ်ကကျောင်းနားကဆိုင်တန်းပေါ့ ။
ဈေးမရောင်းရ ဆိုင်းဘုတ်က သစ်ပင်မှာချိတ်ထားတော့ သစ်ပင်ပေါ်မှာပဲ မရောင်းရဘူးလို့ထင်ပြီး သစ်ပင်အောက်မှာပဲရောင်းနေတာနေမှာပေါ့နော် ……….
ကြည့်ရတာဆိုးနေပါလားနော်။ ဈေးမရောင်းရလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာမှ ဈေးရောင်းနေတယ်။တော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်စ၇ာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ စည်ပင်တွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ဒီစည်ပင်တွေကိုပိုက်ဆံပေးထားပြီး ဒီဈေးသည်တွေက ထွက်တာပါ။ ဒါဆိုရင်လည်းဒီဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ ဖြုတ်ဦးပေါ့။ စည်ပင်ရယ်…ဘာဥပဒေမှထုတ်မနေပါနဲ့။သိက္ခာကျလွန်းလို့ပါ။
တစ်ခုခု စဉ်းစားဘို့လိုပြီး ဗျ…
ကျွန်တော် တွေ့ဖူး တာ ရှိသေးတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်က ခြင်ကြား ကင်း စင် ကျောင်း တဲ့။ တစ် ကျောင်းလုံး
ရေ အိုင်ထဲ မှာ။ ဆေးလိပ် ကင်း စင် နယ်မြေ တဲ့ ကျောင်း တံ ခါး မှာ ကပ် ထား တာ၊ အောက် က
ရေး ထား တဲ့ တံ ခါး အ လှူ ရှင် က ဆေး လိပ် ခုံ နံ မယ် နဲ့ ပြူး နေ တာပဲ။ လူရွှင်တော် တွေ တောင်
သ တိ ရ မိ သေး တယ်။
ဆိုင်းပုဒ်ကပ်ထားတာပဲ ရှိတယ် .. တကယ်တမ်းရောင်းတော့လည်း ဘယ်သူကမှ အမုန်းခံပြီး လာမဖယ်ခိုင်းတာတွေကြောင့် .. ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ် .. ။
စည်ပင်ကလွဲလို့ သာမန်အရပ်သားတွေ ဒီလို ရေးပြီးကပ်ထားလေ့မရှိပါဘူး … (ကားအ၀င်ထွက်ရှိသည်ပိတ်မရပ်ရဆိုတာမျိုးကလွဲရင်ပေါ့ ) … အဲ့ဒီတော့ … ရေးသာရေးပြီး နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းအတွက် ဇာတ်ညွှန်းမရှိသလိုဖြစ်နေတယ် .. ။
အိမ်နားမှာ အမှိုက်ပုံရှိတယ် .. အရင်ကဆို … အမှိုက်မပစ်ရ ရေးတုန်းက လစ်ရင်လစ်သလို လာပစ်တယ် .. ။ နောက်ပိုင်း ဆိုင်းပုဒ်ကို အမှိုက်မပစ်ရ ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းလို့လည်းရေးထားပြီး .. လာပစ်တဲ့ လူကို … ရပ်ကွက်က စောင့်ဖမ်းပြီး ဒဏ်ရိုက်တယ် … ။ နောက်ပိုင်းမှ အဲ့ဒီနေရာလည်း အမှိုက်ပုံကပျောက်ပြီး … အဆောက်အုံကြီးဖြစ်သွားတော့တယ် … ။
ဆိုလိုတာက ..ကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြီးလျှင် … နောက်ဆက်တွဲ စောင့်ဖမ်းတာတို့ ဒဏ်ရိုက်တာတို့ပါ .. လုပ်ရတော့မယ်လေ …. ဒါကို .. ဆိုင်းပုဒ်တင်တာနဲ့ ..ငါ့တာဝန်ပြီးပြီကျန်တာ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ နေလို့မှ မရတာ … ။
မှန်တယ်။ အိတုံပြောတာ Fair Enough :-)
ဒီလိုပုံတွေအတွက် အထူးကတ်တဂရီလုပ်ပြီး.. ပွိုင့်၅၀၀ ပေးတာမျိုးလုပ်ချင်နေမိတယ်..
နိုင်ငံတော်သစ်အတွက်.. လိုအပ်ချက်တခုကို.. ကြယ်ငါးကောက်ပစ်ပြီး တတပ်တအား ဖြည့်စည်းတာမျိုးလို့ ထင်မိလို့ပါ…။
၁) နေရာအချိန် ပါရှိရမည်..
၂) စည်းကမ်းနှင့် ချိုးဖေါက်နေသည့် လူ သို့ အဖြစ်တခုပါရမည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ မသိတဲ့ ပုံမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေ့ါနော် .. ဟီးဟီး … ။
မျက်နှာပါပါအောင် ရိုက်လာပြီး … ရွာထဲကတစ်ယောက်ယောက်များဆိုလျှင်တော့ .. ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ .. ဟီးဟီး .. ။
စည်းကမ်းရှိရှိ ဒီမိုကဒေစီ ဖော်ဆောင်ဖို့ ..ဒီလိုပုံတွေ လိုတာပေါ့ဂျာ..
ကိုခိုင်…ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်…အဲဒီလိုမျိုး အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် စည်းကမ်းကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ထောက်ပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုများများလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားသင့်တယ်…၀န်ထမ်းရော…ပြည်သူရော စည်းကမ်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့…
သူတို့ဒီမှာဈေးရောင်းလို့ ဘယ်သူတွေအကျိုးရှိလဲ ။ ဘယ်သူတွေ အကျိုးယုတ်လဲ။ ဒါဟာလည်းသမုဒ္ဒယာဝမ်းတထွာအတွက် သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်ဖြစ်နေလို့ခွင့်ပြုသင့်တယ်ထင်တယ်။ kyeemite ပြောတာသဘောကျတယ်။ သန်သန်စွမ်းစွမ်းကြီးနဲ့ တောင်းမစားပဲ ငွေကိုလွယ်လွယ်ရအောင် ခိုးဆိုးလုယက်နေမှ ပိုဆိုးမယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ၀င်ငွေမရှိရင် ဒီအတိုင်းအငတ်ခံနေကြမှာမဟုတ်ပါ ။
မတူသော အတွေး ဆိုရင် ……….
အဲဒီ “ဈေး မရောင်းရ” လို့ ရေးတာဟာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက် ရှိရမယ်။
ရှိတာကို ချိုးဖောက်ရင် ဈေးရောင်းသူ အပြစ် …
မရှိဘဲ ဒီအတိုင်း လိုက်ကပ် ထားရင်တော့လဲ ….
နှစ်ဘက် ကို စဉ်းစားကြည့်တာပါ။ ;-)
လေးဖက်၊ အစ်ကိုကြီးဖက်၊ ဆြာဖက်